Tag: ịzụta mkpebi | Martech Zone
Tag: purchasezụ mkpebi
Omume Milzụ Otu Narị Afọ Iri Dị Iche n'Ezie?
Mgbe ụfọdụ, m na-asụ ude mgbe m nụrụ okwu ahụ nke otu puku afọ na mkparịta ụka ahịa. N’ụlọ ọrụ anyị, ọtụtụ puku afọ gbara m gburugburu, yabụ nkwenye nke ụkpụrụ ọrụ na ikike m na-atụ m ụjọ. Onye ọ bụla m maara na afọ na-agwụ ike ha ma nwee nchekwube na ọdịnihu ha. M hụrụ n'anya ọtụtụ puku afọ - mana echeghị m na a na-agba ha uzuzu anwansi nke na-eme ka ha dị iche na onye ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ puku afọ m na-arụ ọrụ enweghị atụ egwu… dị ka
Wzọ 8 maka tomepụta Ọdịnaya Na -emepụta Ndị Ahịa
Mọnde, Febụwarị 20, 2017 Mọnde, Febụwarị 20, 2017 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga, anyị na-enyocha ọdịnaya ndị ahịa anyị niile iji mata ọdịnaya nke na-eme ka anyị mara, itinye aka na mgbanwe. Companylọ ọrụ ọ bụla nke na-atụ anya inweta na-eduga ma ọ bụ na-azụlite azụmaahịa ha na ntanetị nwere ọdịnaya. Trusttụkwasị obi na ikike ịbụ igodo abụọ maka mkpebi ịzụta ihe ọ bụla yana ọdịnaya na-eme mkpebi ndị ahụ n'ịntanetị. Nke ahụ kwuru, ọ ga-achọ nyocha ngwa ngwa na nyocha gị tupu ị chọpụta na
Mmetụta Social Media gosipụtara na Ahụmịhe Ndị Ahịa
Saturday, April 16, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Liz Greene
Mgbe azụmahịa malitere ịbanye na ụwa nke mgbasa ozi mmekọrịta, e jiri ya dị ka ikpo okwu iji zụọ ahịa ngwaahịa ha ma mụbaa ahịa. N'ime afọ ole na ole gara aga, agbanyeghị na mgbasa ozi mmekọrịta nke ndị na - ahụ maka mmekọrịta n'ịntanetị - ebe ị ga - emekọrịta ihe na ụdị ha masịrị ha, nke ka mkpa, chọọ enyemaka mgbe ha nwere nsogbu. Ọtụtụ ndị ahịa karịa mgbe ọ bụla na-achọ ka ha na ndị ahịa kwukọrịta site na mgbasa ozi mmekọrịta, yana nke gị
Mmetụta nke Akara na Mkpebi Purzụ Azụ Ahịa
Sọnde, Septemba 27, 2015 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Douglas Karr
Anyị na-ede ma na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara njirimara na mkpebi ịzụta dịka ọ metụtara mmepụta ọdịnaya. Recognitionghọta akara na-arụ ọrụ dị mkpa; ikekwe karia ka ị chere! Ka ị na-aga n'ihu na-eme ka ị mara aha gị na weebụ, buru n'uche na - ọ bụ ezie na ọdịnaya ahụ nwere ike ọ gaghị eduga ozugbo na ntugharị - ọ nwere ike iduga nrịba ama. Ka ọnụnọ gị na-abawanye na ika gị ga-abụ akụ ntụkwasị obi,
Anyị gabigara otu ogbo na teknụzụ ebe a hụrụ weebụsaịtị dị ka nnukwu ọnụ ụzọ dị n'etiti onye ahịa na azụmahịa. A na - eji ọgbakọ eji eme ihe, Ajụjụ, Ajụjụ enyemaka na email na ntinye nke ebe oku dị oke ọnụ yana oge emetụtara iji dozie nsogbu ndị ahịa. Mana ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-ajụ ụlọ ọrụ ndị anaghị eburu ekwentị. Weebụ weebụ mkpanaka anyị, ngwa mkpanaka na ụwa ekwentị mkpanaka ugbu a chọrọ nke ahụ
Tuesday, October 7, 2014 Sunday, October 5, 2014 Douglas Karr
Ka ọ na-erule oge azụmahịa ọzọ na-akpọtụrụ azụmahịa gị iji zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ha bụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ rue ụzọ 90 nke ụzọ njem njem ha. Ihe karịrị ọkara nke ndị niile B2B na-azụ ahịa na-amalite usoro nke ịhọrọ ndị na-ere ha ọzọ site na ịme nyocha na-enweghị atụ gbasara nsogbu ịma aka metụtara nsogbu ha na-eme nyocha. Nke a bụ eziokwu nke ụwa anyị bi na ya! Ndị na-azụ B2B enweghị ndidi ma ọ bụ oge
Sayensị dị n’azụ mgbe ndị mmadụ na-eme mkpebi nzụta bụ ihe ịtụnanya. BigCommerce bụ sọftụwia a ma ama dị ka ọrụ ecommerce na ọrụ ịzụ ahịa (SaaS). BigCommerce na-enye gị plethora nke ngwa ọrụ e-commerce nwere ntụkwasị obi, gụnyere weebụsaịtị, aha ngalaba, ụgbọ ala ịzụ ahịa echekwara, ndekọ ngwaahịa, ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, CRM, akaụntụ email, ngwaọrụ azụmaahịa, ịkọ akụkọ yana ụlọ ahịa kachasị mma. N'oge na-adịbeghị anya ha mepụtara ihe ọmụma na-enye nkọwa banyere ihe na-emetụta mkpebi ịzụta. Anyị na-ekpuchi elu 10
Kpụrụ azụ ahịa nke ndị ahịa
Wednesday, May 23, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ndị na - azụ ahịa taa etolitela omume pụrụ iche tupu ịzụrụ - ọbụlagodi mgbe ha na-azụ ahịa na mpaghara ha. Ojiji nke ngwa mkpanaka na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka tupu ịzụta offline na-eto eto na ewu ewu. Ndị ahịa na-achọta ebe ịzụ ahịa, ịgụ nyocha, na-achọ azụmahịa na nyocha ngwaahịa ahụ. Nnukwu ozi maka ndị na-ere ahịa bụ na ịzụ ahịa n'ime mmadụ ka dị mkpa. Onwe, M na-eme nnyocha online na ịzụta online… ayafi na m na-echegbu onwe na-ngwaahịa na m